अष्ट्रेलिया विशेषः बुबाआमाको बीमा अवश्य गर्नुहोस्
१. एकजना ५० वर्षीया आमालाई अचानक श्वास फेर्न गार्हो महसुस भएपछि वेष्टमीड अस्पातल पु¥याइयो । उनको फोक्सोमा इन्फेक्सन भएको पत्ता लाग्यो । केही दिन आइसीयू र करिब दुई हप्ता सामान्य वार्डमा राखेर उपचार गरेपछि उनलाई छोरीज्वाइँले घर ल्याए । उनका ज्वाइँका अनुसार लगभग सबै उपचार खर्च बीमा कम्पनीले ब्यहो¥यो ।
२. छोराबुहारीलाई भेट्न आएका करिब ६५ वर्षका एकजना बुवालाई गम्भीर मस्तिष्कघात भयो । समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिएकोले उनलाई बचाउन डाक्टरहरू सफल भए । उनी अझै अस्पतालमै छन् । उनका छोराले मलाई फोन गरेर सोधे, ‘दाइ, पुरानो डेट राखेर बीमा गर्न मिल्दैन? हाम्रो त सर्वस्व नै खर्च हुने भा े।’ दुःखको कुरो, त्यसरी घटना नै घटिसकेपछि कुनै पनि बीमा कम्पनीले पुरानो मितिबाट लागू हुने गरी बीमा गर्न मान्दैनन् ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । गत वर्ष सेन्ट जर्ज माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरले कोग्रा र आसपासका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बुवाआमालाई भिसासम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले एउटा कार्यक्रम राखेको थियो । उहाँहरूलाई भिसासम्बन्धी जानकारी दिन र उहाँहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनको लागि मलाई बोलाइएको थियो । त्यसै क्रममा मैले उहाँहरूलाई ‘तपाईँहरूमध्ये कतिले बीमा गराउनुभएको छ ?’ भनेर सोधेको थिएँ । अधिकांशसँग बीमा थिएन । प्रायः सबैको छोराबुहारी वा छोरीज्वाइँले बीमाको व्यवस्था गर्ने हुनाले कैयौँलाई आफ्नो बीमा भए नभएको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, मेरो अनुभवमा अझै पनि बुवाआमाको बीमा गराउने भन्दा नगराउनेको संख्या धेरै छ ।
बीमा नगराउँदा हुन्न?
धेरैको प्रश्न हुन्छ— अनिवार्य छैन भने किन गर्ने? फेरि मेरो बुवाआमा पूरै निरोगी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने नै छैन भने बेकारमा प्रिमियममात्र किन तिर्नु? प्रतिव्यक्ति महिनाको झण्डै एक सय डलर तिर्न म आर्थिक रूपमा सक्षम कहाँ छु र?
बीमा गर्नु भनेको आफूलाई आर्थिक रूपमा हुनसक्ने नोक्सानीबाट जोगाउनु हो । अस्ट्रेलिया आउने बुवाआमा प्रायः सबैको उमेर ५०÷५५ वर्ष माथिकै हुन्छ । केही त ८० वर्ष माथिका बुवाआमा समेत आउनुभएको भेटिन्छ । जति उमेर बढ्दै गयो, स्वभाविक रूपमा स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जान्छ । कैयौँ बुवाआमामा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेटको रोग, दम, मुटुको रोग आदि समस्याहरू हुन्छन् । निरोगी नै रहेका बुवाआमामा पनि कुनै पनि बेला कुनै पनि किसिमको रोग एक्कासी देखा पर्न सक्दछ । त्यस्तै विभिन्न प्रकारका आकस्मिक दुर्घटनाहरूमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेकै हुन्छ ।
बुवाआमा निरोगी हुनुहुन्छ भन्दैमा उहाँहरूलाई अस्ट्रेलिया बसाइँ अवधिभर कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य उपचारको जरुरत पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । सानातिना समस्याको लागि त खासै गाह्रो नपर्ला, तर कुनै ठूलो समस्या देखिएमा भने धेरै रकम खर्च हुन्छ । आफन्त बिरामी हुँदा हुने मानसिक तनाव र चिन्तामाथि अझ आर्थिक बोझ पनि थपिँदा परिस्थिति झन् अप्ठ्यारो बन्नपुग्छ । बीमा गर्नाले कम्तीमा पनि आर्थिक समस्याको कारणले हुने तनाव कम हुन पुग्छ ।
रह्यो, प्रिमियमको कुरा, अस्थायी भिसामा आएका बुवाआमाको प्रिमियम खर्च करिब एक सय डलरप्रति व्यक्ति प्रति महिना पर्दछ । यो रकम महंगो त हो, तर बुवाआमालाई अस्ट्रेलिया घुम्न बोलाउन सक्ने छोराछोरीले यति रकम बीमामा खर्च गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । बीस हजार डलर पर्ने कारको इन्सुरेन्स गर्न नहिच्किचाउने तर लाखौं डलर खर्च हुनसक्ने बुवाआमाको स्वास्थ्यपोचार खर्चको बीमा गर्न भने हिच्किचाउने हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनु अत्यावश्यक छ । यदि बीमा शुल्क तिर्नकै लागि पनि गाह्रो छ भने झन् अस्पतालको बिल नै तिर्नुप¥यो भने कसरी तिर्ने ?
होइन, आर्थिक अवस्था असाध्यै गाह्रो छ र बीमा शुल्क तिर्न सक्ने हैसियत साँच्चिकै छैन भने अहिले बुवाआमालाई घुम्न नबोलाइहाल्ने कि ? जब बीमा शुल्क तिर्न सक्छु भन्ने लाग्छ, तबमात्र बुवाआमा बोलाऔँ । तर, बुवाआमा बोलाउने तर बीमा नगराउने सोच भने आजैबाट त्यागौँ ।